Apple wuxuu balaariyaa awooda iPad Air 2 iyo Mini | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan u maleynay inay ka qaadayaan suuqa oo ay sii daayaan Air 3 ama ay sameeyaan wax la xiriira. Cusboonaysiinta badeecadaas oo kale qiil ma leh. Ma jiro wax war ah oo la soo bandhigi karo iyada oo aan la daboolin ama aan laga dhaafin iPad Pro, sidaa darteed Apple ma awoodi karo inay cusbooneysiiso kala duwanaanta hawada ee kiniiniyadeeda. Sidan xaalku yahay, waxay ahayd inay u baxaan istiraatiijiyad kale: Sug, dhiirrigeliso oo hagaajiso, adigoon cusbooneysiin.
IPad-ka 2 Air ma yahay shey gadaal ka dhacaya oo ay tahay inuu baxo? Maya iyo kun jeer maya. Sida kaliya ee ay ku baabi'i karto waxay noqon kartaa inay soo qaadato Air 3 ama wax la mid ah. Haddii uusan qofna kugu badalin adiga oo u dhigma isla markaana hagaajiya tilmaamahaaga, kama bixi doontid. Wixii Apple ay sameysay waxay ahayd inay sidiisa usii ahaato laakiin ay balaadhiso awooda keydinta iyada oo qiimaha ilaalinaysa ama la qabsanaysa. Mar dambe ma noqon doonaan 16 ama 64Gb. Aad ayaan ugu fiirsanayaa wararka.
1 IPad Air 2 iyo Mini Expand Capacity
2 IPads waa mustaqbalka Apple
IPad Air 2 iyo Mini Expand Capacity
Waxaan diirada saarayaa qoraalkan xaddiga Hawada ee 9,7-inch, taas oo aan kaliya ahayn tan aan haysto, laakiin waxaan u arkaa inay tahay midda ugu soo jiidashada badan adeegsadayaasha iyo tan ugu muhiimsan. Laakiin, maxaa yeelay wax waliba waxay leeyihiin laakiin, ma aha kan keliya ee ay ku dhacday warkan wanaagsan. Apple sidoo kale waxay go'aansatay inay wax ka bedesho iPad Mini 4 Xitaa waxaad oran kartaa sidoo kale Mini 2, oo waxaad kaheleysaa oo kaliya xulashada 32Gb oo ah € 289, Haddii kuwaaga ay yihiin Ipad-yada yaryar oo loo habeeyay inaad ku qaadato hal gacan oo aad u rarto sidii iyagoo casriga ah, markaa adiga waxaad ka heli kartaa iPad Mini 4 oo leh 32Gb ama 128Gb for 429 ama € 539. Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah xiriirka ay la leedahay hawada kala duwan.
Aad u feejignaan, maxaa yeelay 2Gb ama 32Gb iPad Air 128 qiimahiisu waa Mini 4. Haduu cabirku yahay 9,7 inji ama 7,9 isku qiimo ayey kugu kici doontaa. Dhab ahaan, Apple? Ma sidan ayaad u tixgelinaysaa kiniiniyadaadu inay qiimo leeyihiin? Xaqiiqda ah inay isku qiimo yihiin waxay iila muuqatay mid aad ii xoog badan. Maaha sababta oo ah Hawada waa raqiis, laakiin maxaa yeelay mini waa qaali. Dabcan, waa inaan maskaxda ku haynaa inay leedahay qadar aad u wanaagsan oo keyd ah.
Halkii aan ka caban lahaa qiimaha Mini, waxaan ku mahadin doonaa in Hawada aysan mar dambe kor u kicin, laakiin ay ku sii jirto qiimo soo jiidasho leh oo wanaagsan. Waa rajo in kiniiniyada Apple oo dhan ma dhaafi doonaan 650 XNUMX, sida ku dhacday kala duwanaanta Pro, taas oo ay tahay inaan markaa ku darno qalab. Labada kiiboodba iyo qalinkii Apple. Sababtoo ah maadaama aad iibsato Pro waxaad ku qaadaneysaa wax walba.
IPads waa mustaqbalka Apple
Si tartiib tartiib ah ayey u ballaariyaan keydkooda iyo qeexitaanadooda. Wadadiisu waa inay noqoto bedelka kombiyuutarka, PC, iyo xitaa Macbook. Tan, sida ku dhacday iPhone-ka, waxay ogaadeen in 16Gb iyo 64 ay yihiin awoodo gaagaaban oo haa ama haa gaagaaban. 32 sidoo kale waa qiimo dhac, laakiin sida ugu yar awood ahaan ma xuma. Had iyo jeer way ka fiicantahay 16. IYO € 110 dheeraad ah, waxaad u boodaysaa 128Gb. Taasi waa in la yiraahdo, afar laab. Maxaad kale oo aad u baahan kartaa
Apple waxay ku qanacsan tahay in mustaqbalka shirkaddu ku jirto kiniinka. Ipadka, ha ahaado mid pro, mini ama loo yaqaan Pepe ama Juan. Kumbuyuutarradu sidoo kale waa la iibin doonaa, iPhone-yadu waxay sii wadi doonaan inay guuleystaan, macnaheedu maahan inay dhammaanayaan Macs ama wax soo saar kale. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa si fudud u doorbidaya inay ka shaqeeyaan iPad-ka oo ay u isticmaalaan isaga iyo kuwa kale, baahiyaha ama shaqada, waxay dooran doonaan nidaamka hawlgalka desktop-ka. Noqo sida ay noqon karto, macruufka iyo aaladahaagu waa inay horumariyaan oo koraan. IPhone-ku aad buu u dhameystiran yahay mana jiraan horumarin badan oo lagu sameyn karo, laakiin iPad-ku wuxuu leeyahay qol-madaxeedyo badan iyo safarro.
Waxaan ku arki doonnaa sanadka 2017 waxa ay nagula yaabeen qormadan xiisaha badan. Haddii ay wax ku dhacaan ama aysan ku dhicin iPad Air 2 iyo haddii iOS ay dhab ahaantii koraan oo ay ku kala duwanaadaan xitaa in ka badan nidaamka kiniinka. Waqtigan xaadirka ah waxaan ognahay oo keliya isbeddelada uu Apple ku sameeyay dukaankiisa iyo waxyaabaha uusan soo bandhigin bisha Sebtember.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iPad » Apple wuxuu balaariyaa awooda iPad Air 2 iyo Mini